ကချင်ပြည်နယ် – Page 10 – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ညောင်လေးပင် သြဂုတ်လ သတင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ရှုရန်
မြစ်ကြီးနား၊ စက်တင်ဘာ ၁ဝ
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို ကိုယ်စားပြု၍ ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် (၂) မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးဆီဟူးဒွေ့သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ယမန်နေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် မြစ်ကြီးနား မြို့ ရမ်ပူရပ်ကွက်မှ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအား သွား ရောက်တွေ့ဆုံကာ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ မူဝါဒများနှင့် ပြည်သူ အပေါ် အမှန်တကယ်ထားရှိသော သဘောထားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရရှိရေးအတွက် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိုးညှင်း စက်တင်ဘာ ၉
မိုးညှင်းမြို့နယ် ဟိုပင်မြို့ (၁၃)ကြိမ် မြောက် ဝါတွင်းကာလ နေ့စဉ် သံဃာ့ ဒါနပိဏ္ဍပါတ် ဆွမ်းလောင်းလှူပူဇော်ပွဲ အတွက် ဒေသပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဆွမ်းဆန်တော်ကိုး အိတ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ဆွမ်းဆန်တော်အိတ်များ လှူဒါန်းရာ သို့ မိုးညှင်းခရိုင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ဝင်းထွန်း နှင့်ကော်မတီဝင်များ၊ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလမိုင်နှင့်ကော်မတီဝင်များ၊ ဟိုပင်ဒေသ ပါတီတာဝန်ခံဦးမြဝင်းနှင့်ကော်မတီဝင် များ၊ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုပါတီကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌများ၊ပါတီလူငယ်ရေးရာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပါတီဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
မြစ်ကြီးနား စက်တင်ဘာ ၉
ပြည်နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရာဝမ်းဂျုံ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို ကိုယ်စား ပြု၍ ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်(၂)မှ အမျိုးသားလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးဆီဟူးဒွေ့ နှင့်အဖွဲ့သည် ယခုလ ၇ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက မြစ်ကြီးနားမြို့ ရွှေစက်ရပ်ကွက်ရှိ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ မူဝါဒများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ပါတီအောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးဟောပြော ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၈ – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် (၂) မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်
၂၀၁၈ – ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကချင်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအား ကိုယ်စားပြုပြီး အရွေးချယ်ခံမည့် ဦးဆီဟူးဒွေ့ သည် အဘ – ဦးချော်ဖာတီနှင့် အမိ – ဒေါ်ခူမာမဲတို့မှ ၂၉ . ၇ . ၁၉၆၈ ရက်နေ့တွင် ပူတာအိုမြို့ နယ် မူလာအွန်ကျေးရွာ ၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း (၄) ဦးအနက် အကြီးဆုံးသားဖြစ်ပါသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမိသားစုက မြို့သစ်ကြီးရပ်ကွက် အေးမြသာယာနယ်မြေရှိ ဓမ္မစကူးလ်ကျောင်းမှကျောင်းသားကျောင်းသူ ၁၅ဝ တို့အား စက်တင်ဘာ ၂ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အာဟာရဒါနအဖြစ် ကြာဆံချက်များ ကျွေးမွေးလှူဒါန်းစဉ်။
မိုးကောင်းမြို့နယ် ပြည် ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီက ကြီးမှူး၍ နိုင်ငံရေးစီမံ ခန့်ခွဲမှုဆင့်ပွားသင်တန်းအမှတ် စဉ်(၁/၂ဝဝ၈)ဖွင့်ပွဲကို သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက မြို့နယ်ပါတီရုံး၌ ကျင်းပရာ မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းအောင်က သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ်။
မိုးကောင်းမြို့နယ် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်း အောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ သြဂုတ် ၃ဝ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေသည့် ကညင်မြိုင်ကျေးရွာအုပ်စုပါတီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမောင်အား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ထောက်ပံ့ငွေများသွားရောက်ပေးအပ်စဉ်။